China Hot bacwilisa galvalume steel ohlobo Ukwakha futhi Factory | I-ESSAR
Igama lomkhiqizo Amakhoyili wensimbi acwilisiwe ashisayo
Ibanga I-SGCC / SGCH / DX51D / ASTM A792
Ukumbozwa kwe-Aluzinc 30-150 g / m2
Izinto amakholi wensimbi abandayo
Ubukhulu Usayizi 0.16mm-2.0mm
Ubuso beshidi lensimbi le-galvalume buveza imbali yenkanyezi ebushelelezi, eyisicaba futhi enhle, futhi umbala oyisisekelo umhlophe ngesiliva. Isakhiwo esikhethekile sokumboza senza kube nokumelana nokugqwala okuhle kakhulu. Impilo yesevisi ejwayelekile ye-aluminium-zinc plate ingafinyelela ku-25a, futhi inokumelana okuhle nokushisa futhi ingasetshenziswa endaweni enezinga lokushisa eliphakeme elingu-315 ° C; ukunamathela kokumbozwa nefilimu kukapende kuhle, futhi kunezinto ezinhle zokucubungula, futhi kungagxivizwa, kusikwe, kushiselwe, njll .; Ukuqhutshwa kwendawo kuhle kakhulu.
Ukwakheka kokumboza kwenziwa nge-55% aluminium, i-43.4% zinc ne-1.6% ye-silicon ngesisindo sesisindo. Inqubo ukukhiqizwa lashukumisa steel ishidi kuyefana lashukumisa steel ishidi futhi ishidi aluminized, okuyinto okuqhubekayo oncibilikisiwe inqubo enamathela. Ishidi lensimbi lashukumisa i-aluminium-zinc elingamaphesenti angama-55 linokumelana nokugqwala okungcono kunensimbi yensimbi ehlanganisiwe yobukhulu obufanayo lapho ivezwa endaweni efanayo nhlangothi zombili. Ipuleti lensimbi engu-55% ye-aluminium-zinc alloy camera aluminium-zinc ayigcini nje ngokumelana nokugqwala okuhle, kepha futhi nemikhiqizo efakwe umbala inokunamathela okuhle nokuguquguquka.
Ngokuya ngemininingwane, ikhono eliphelele lokulwa nokugqwala kwe-55% aluminium-zinc plating liphindwe izikhathi ezine lelo lokunamathisela ngogqinsi olufanayo.
Ukwakhiwa: uphahla, izindonga, amagaraji, izindonga ezingenawo umsindo, amapayipi nezindlu ze-modular, njll.
Imoto: i-muffler, ipayipi lokukhipha, okunamathiselwe kwe-wiper, ithangi likaphethiloli, ibhokisi lamaloli, njll.
Izinto zasendlini: indiza yesiqandisi, isitofu segesi, i-air conditioner, i-oveni ka-microwave kagesi, ifreyimu ye-LCD, ibhande lokuqinisekisa ukuqhuma kwe-CRT, ukukhanya kwangemuva kwe-LED, ikhabethe likagesi, njll.
Ezolimo: indlu yengulube, indlu yenkukhu, igranari, amapayipi abamba ukushisa, njll.
Abanye: ikhava yokuvikela ukushisa, umshini wokushisa, isomisi, isifudumezi samanzi, njll.
Langaphambilini Amapaneli wesangweji e-EPS
Olandelayo: Amakhoyili wensimbi acwilile ashisayo